Alatsinainy, Jolay 7, 2008 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Mety ho nifalifaly kely tamin'ny iMovie aho ity horonantsary ity! Ity no fivoriana voalohany nataon'ny Southside Smoosier Tech Club tao Ny amboaram-boanjo.
Midira amin'ny klioba any Indiana kely kokoa. Hihaona aminao izahay amin'ny volana manaraka!
Tags: famolavolana mailaka findaytoeram-piasana
Fanamboarana PC anatiny ho an'ny fidirana ivelany
7 Jul 2008 amin'ny 11:59 PM
Nice! Asa fanovana haingana koa. Afaka mihaona isan-kerinandro na isam-bolana aho. Manantena aho fa tsy hanana lalao softball be dia be intsony aho amin'ny manaraka.
Jul 8, 2008 amin'ny 12: 38 AM
Resadresaka mahafinaritra, nahafinaritra tokoa ny fivoriana voalohany. Niresaka momba ny zavatra rehetra hatrany Haliburton ka hatramin'ny VOIP.
Jul 8, 2008 amin'ny 9: 17 AM
Tokony nampiasa 'Southside' nataon'i Common feat. Kanye West. Mety amin'ny volana manaraka ve? 🙂
8 Jul 2008 amin'ny 1:22 PM
Woo-hoo, malaza aho. Lahatsary mahafinaritra. Fanovana tsara.